War deg deg:- Taliyaha Ciidanka Xoogga oo qoray Warqad Iscasilaad ah - Awdinle Online
War deg deg:- Taliyaha Ciidanka Xoogga oo qoray Warqad Iscasilaad ah
February 20, 2020 (Awdinle Online) – war aah hadda ka helney Taliska Ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa sheegeya in Taliyaha Ciidanka XDS Sareeye Guuto Odawaa Yuusuf Raage uu qoray warqad iscasilaad ah.
Inkastoo uusan weli taliyihu gudbin warqadda, waxaa suugal ah inuu shaqada isaga tago.
Arintan ayaa waxaa sabab u ah baa la yiri in waayahan dambe ay dhibaatooyin ka jireen hanaankan shaqada iyo hogaaminta taliska ciidanka xoogga dalka soomaaliyeen.
General Odawaa ayaa ka cabanayey mudooyinkaba in dad rayid ah oo aanba xaq u laheyn howlaha ciidanka in ay faragelin ku haayeen, iyagoo sheeganayo ama isticmaalaya awoodda iyo magaca Ra’iisul Wasaaraha.
Cabashadan oo socotay mudo dheer ayaa la sheegey in Ciidan Xoogga uu gacanta u galay labo dumar ah oo kala ah xoghayenta Ra’iisul Wasaaraha iyo ku-simaha agaasimaha guud ee Wasaaradda gaashaandhigga, waxaa taasi bar bar socda dhibaato kale oo ciidanka xoogga ku hayo La-taliyaha Madaxweynaha Cabdisaciid Muuse Cali oo ciidanka mar walba ku tilmaama ciidamo beeleed, una sheega dowladaha shisheeya ee caawiya ciidanka xoogga.
Warar kale ayaa tilmaamaya in sababaha ciidan xoogga faragelintan loogu haayo ay tahay dano gaar ah iyo baayac-mustar ka dhex socda ciidanka iyo Wasaaradda oo gadaal ka fadhiyo Ra’iisul Wasaaraha.
Previous articleDowladda Federaalka ayaa Boqolaal Shacab reer Gedo ah ku Xayirtay Muqdisho
Next articleWasiir Cawad oo Magacaabey Xoghayaha Joogtada ah ee Wasaaradda Arrimaha Dibadda